छक्कापन्जा–२ का गीत चोरिएका हुन् कि प्रभावित ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः भाद्र २८, २०७४ - साप्ताहिक
छक्कापन्जा–२ का गीत चोरिएका हुन् कि प्रभावित ?
लौ कस्तो धर्मसंकट सिर्जना हुने प्रश्न सोध्नुभएको ? अब चोरी भनूँ भने पनि फसाद, प्रभावित भनूँ भने पनि फसाद । बरु उत्तर नै दिन्नँ । यसको जवाफ तपाईंसँग चिया पिउँदै दिउँला है ?
- भरत रेग्मी, भिज्युअल एडिटर
सात सुरको संगीतमा कुनै गीतको मेलोडीको केही अंश अर्कोमा आउन सक्छ । म त्यसलाई चोरेकै भन्ने पक्षमा चाहिँ छैन ।
- सीताराम पोखरेल, गायक
लोकगीतबाट प्रभावित भन्न सक्नुहुन्छ । चोरी भएको भए म यतिबेला कपिराइट मुद्दामा प्रहरीचौकी धाइरहेको हुन्थे ।
- दीपकराज गिरी, अभिनेता/निर्माता
मौलिक सिर्जना त नितान्त फरक हुनुपर्ने हो । छक्कापञ्जा–२ का गीतहरू प्रभावित हुन् ।
- अनुशा पौडेल, टेलिभिजनकर्मी
दीपकराज गिरी मेरा साथी हुन् । त्यसैले प्याच्च यसै हो भन्न पनि भएन, तर उनका पछिल्ला दुई चलचित्रका गीत–संगीतको तुलनामा मलाई छक्कापञ्जा–२ का गीत अलि कमजोर लागे । दीपकजीले यसमा त्यति ध्यान नपुर्‍याएजस्तो लागेको छ ।
मेरो विचारमा सस्तो लोकप्रियताका लागि म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर भनेर हामी दर्शकलाई झुक्याइएको हो ।
- विशाल घिमिरे, गायक
चोरिएको हो वा प्रभावित, त्यो त थाहा भएन । श्रोता–दर्शकलाई मन परेपछि त्यो सुपरहिट भयो । चोरेर होस् वा किनेर जसरी दिए पनि फल वा मिठाई मीठै हुन्छ, तीतो हुँदैन क्यार † सुन्दा मिठो लागेपछि जेसुकै होस् ।
- कमलमणि नेपाल, नाट्यकर्मी
जुम्ल्याहा बच्चा सबैलाई उस्तै लाग्लान्, तर आमाले छुट्याउन सक्छिन् । त्यस्तै संगीतको गहिराइ नबुझ्नेलाई कुनै–कुनै नेपाली गीत उस्तै लाग्यो भन्दैमा चोरेको भन्न कहाँ पाइन्छ ?
- सन्तोष खनाल, फिल्मी किरो
कस्तो अप्ठ्यारो प्रश्न ?
- बसन्त निरौला, निर्देशक
सही उत्तर दिऊँ कि बनावटी ?
- विकास लामिछाने, मोडल
मेरो धारणामा धुन र शैली मात्र मिलेको हो, अरू केही मिल्दैन ।
- आयुष्मान देशराज श्रेष्ठ, अभिनेता
मैले समाचार हेरेर मात्र यो कुरा थाहा पाएको हुँ । सत्यतथ्य के हो ? थाहा भएन ।
- गम्भीर विष्ट, नृत्य निर्देशक
हाम्रा लोकगीतहरूको जगेर्ना गर्नुपर्छ । यो पनि एक प्रकारको जगेर्ना नै हो । त्यसैले यसलाई चोरीभन्दा पनि प्रभावित भएको भन्न सकिन्छ । पञ्जाबी भांगडा, गजल आदि भारतीय संगीतमा प्रभावित भएरै प्रयोग भैरहेका छन् भने नेपाली लोकलयबाटै प्रभावित हुँदा यति ठूलो बखेडा किन ?
- सुवास प्रधान, संगीतकर्मी
चोरिएको भए सम्बन्धित सर्जकले मुद्दा हाल्नुपर्ने हो । त्यसो गरेको पाइएन । नचाहिँदो हल्ला मात्र धेरै भयो, गीतको प्रचार नै गर्नु परेन । निर्मातालाई फाइदा, चलचित्रलाई काइदा ।
- लोकराज अधिकारी, गीतकार
लोकगीतलाई पुनर्जीवित गर्न खोजिएजस्तो लाग्छ ।
- जीवन पराजुली, सञ्चारकर्मी
नाइलनको सारी गीत चोरिएकै हो । झ्याम्म–झ्याम्मचाहिँ प्रभावित हो ।
- मिलन शंकर, अभिनेता
नाइलनको सारीचाहिँ मिलाई–मिलाई नक्कल गरेको देखिन्छ, भने दोस्रो गीतको भाका चाहिँ सुदूरपश्चिमको देउडालाई आधार मानेर तयार पारिएको छ, त्यसैले यो गीत देउडाबाट प्रभावित छ ।
- डीपी खनाल, गीतकार
म संगीतको ताल बुझ्ने मान्छे त होइन, तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो संगीतकार प्रभावित भएर फुरेको नयाँ सिर्जना हो ।
- सन्तोष सेन, निर्माता
चोरिएको भए त संगीतकार पुलिस चौकीमा हुन्थें । यसलाई प्रभावित भएको भन्नुपर्छ, तर अलि कम प्रभावित हुन सकेको भए हुन्थ्यो ।
- मनोज गजुरेल, हास्यव्यंग्यकार
जो–कोही जो–कसैसँग प्रभावित हुन सक्छ वा पाउँछ । त्यसैले चोरिएको भन्न मिल्दैन ।
- नील डेविड कटुवाल, हेयर डिजाइनर
सर्जकलाई सम्मान गर्दै लोकगीत–संगीतबाट प्रभावित ।
- दीपाश्री निरौला, निर्देशक
चोरिएकै त होइन, रिदम, टेम्पो केही मिल्दोजुल्दो हुन सक्छ ।
- मोहित मुनाल, गायक/संगीतकार
लोकगीत संगीत सबैको साझा सम्पत्ति हो, जसलाई कसैले पनि आफ्नो भनेर दाबी गर्न मिल्दैन । संगीतकार र एरेन्जरले छक्कापञ्जा–२ का गीतलाई श्रृंगारपटार गर्ने काम मात्र गरेका हुन्, जसमा नैतिकताका आधारमा उनीहरूले आफूलाई उक्त गीतको स्रष्टा भन्न मिल्दैन । यसरी नेपाली गीत–संगीतलाई चलचित्रमा प्रयोग गर्दा आफ्नोपन झल्कनुका साथै ती गीतको संरक्षण
पनि हुन्छ ।
- भीम बिसी, संगीतकार